रातको अँध्यारोमा गुणस्तरीय फोटो खिच्न सकिने मोबाइल :: Setopati
सेल्फी एक्सपर्टको रूपमा परिचित ‘ओपाे’ ले नेपालमा राम्रो बजार पाएको छ। यो चिनियाँ ब्राण्डको स्मार्टफोन हो।
ओपाेको ‘ए’ र ‘एफ’ सिरिजका फोन बढी चल्तीमा छन्। कम्पनीले भर्खरै एफ सिरिज अन्तर्गत ‘ओपो–एफ१७’ बजारमा ल्याएको छ।
ग्राहकको माग बमोजिम विशेषगरि उपभोक्तालाई रातिका समयमा पनि गुणस्तरीय फोटो दिने उद्देश्यले ‘एफ१७’ ल्याएको कम्पनीका पब्लिक रिलेसन म्यानेजर सुरज महर्जन बताउँछन्। उनका अनुसार यो स्मार्टफोन मध्यम मूल्यमा उपलब्ध छ।
केही महिनायता सार्वजनिक गरिएको यो फोनमा के के छन् विशेषता?
ग्राण्डियट डिजाइन प्रयोग गरिएकाे यो स्मार्टफोनमा ६.४ इञ्चको फुल एचडी डिस्प्ले छ। मोबाइलको स्क्रिनको साइज तुलनात्मकरूपमा ठूलो भएका कारण उपभोक्ताले मनोरञ्जनका साथ गेम खेल्नका साथै अन्य भिडियाे हेर्न सक्छन्।
७.४५एमएम मोटाई र १६३ ग्राम तौल भएको यो फोन सहजै पकेटमा अटाउँछ। यसमा प्रयोग गरिएको गोरिल्ला ग्लासले फोन झरिहाल्दा पनि हत्तपत्त फुट्नबाट बचाउँछ।
यसमा १६ मेगापिक्सलको वाइड, ८ मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड, २ मेगापिक्सलको म्याक्रो र २ मेगापिक्सलको डेप्थ क्यामरा छ। त्यस्तै १६ मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामरा छ। गुणस्तरीय फोटोग्राफी दिनु यसको स्मार्टफोनको मुख्य विशेषता हो। यसमा रातिकाे फोटोग्राफीलाई ध्यान दिएर त्यसै अनुरूपको हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर राखिएको छ। यस फोनमा प्रयोग गरिएको एआई अल्ट्रा क्लियर ईञ्जिनले फोटोलाई गुणस्तरीय बनाउने काम गर्छ।
ब्याट्री र स्टोरेजः
फोनमा ४ हजार १५ एमएएच ब्याट्री क्षमताका साथै ३० वाटको फास्ट चार्जिङ सुविधा दिएको छ। धेरै ब्याट्री क्षमता र फास्ट चार्जिङ सुविधाले प्रयोगकर्तालाई दैनिक फोन चार्ज गरिरहनु पर्दैन। प्रयोगकर्ताले ब्याट्री सकिन्छ की भन्ने चिन्ता नगरी ढुक्कले चाहेका सबे एप चलाउन सक्छन्। फोन ८जिबी र्याम र १२८जिबी स्टोरेजमा उपलब्ध छ।
रङ र मूल्यः
ग्राहकले यो फोन नेभीब्ल्यू र डायनामिक अरेन्ज गरी दूई भिन्न रंगमा पाउँछन्। यसको मूल्य. ३३ हजार ९ सय ९० रूपैयाँ छ।
कम्पनीले एफ सिरिजकै ‘एफ१७प्रो’ पनि बजारमा ल्याएको छ। अल्ट्रा-स्लिक डिजाइन गरिएको यो फोन प्रिमियम प्रयोगकर्तालाई लक्षित छ।
यसमा विशेषता निम्न छन्ः
क्यामराः यसमा पछाडि ४८/८/२/२ मेगापिक्सको चार क्यामरा छ भने सेल्फीका लागि १६ र २ मेगापिक्सलको दुई क्यामरा छन्।
ब्याट्रीः ४ हजार १५ एमएएच ब्याटी क्षमता सहित ३० वाटको फास्ट चार्जिङ सुविधा
मूल्यः ४३ हजार ९ सय ९०
प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर ८, २०७७, १२:२०:००